‘घटना हुँदा म सुरक्षाकर्मीसँगै थिएँ, कसरी दोषी भएँ ? : रेशमलाल चौधरी | SaraKhabar.com
‘घटना हुँदा म सुरक्षाकर्मीसँगै थिएँ, कसरी दोषी भएँ ? : रेशमलाल चौधरी
निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीले टीकापुर घटनाको न्यायपूर्ण छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । सिंहदरबारमा सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट आज पद तथा गोपनीयताको सपथ गरेपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै चौधरीले टीकापुर घटनामा आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्नुभएको हो ।
‘घटना हुँदा म सुरक्षाकर्मीसँगै थिएँ, कसरी दोषी भएँ ? चौधरीले भन्नुभयो, ‘म न्यायको पर्खाइमा छु,’ त्यसैले अहिले माला लागाएर जेल जाँदैछु ।’
चौधरीले आफ्नै थारु भाषामा सपथ लिनुभएको छ । सपथलगत्तै पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै चौधरीले घटना हुँदा आफू सुरक्षाकर्मीसँगै रहेको बताउनु भयो । ‘घटना हुँदा म सुरक्षाकर्मीसँगै थिएँ, कसरी दोषी भएँ ? चौधरीले भन्नुभयो, ‘म न्यायको पर्खाइमा छु,’ त्यसैले अहिले माला लागाएर जेल जाँदैछु ।’
उहाँले घटनाबारे गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने र न्यायालयले न्याय दिनुपर्ने बताउनु भयो । ‘मिडियाले सोधी दिनुहोला, मेरो संसद्को लोगोको महत्व कति रह्यो ?’ आफू निर्दोष रहेको पटक-पटक दोहोर्याउँदै चौधरीले भन्नुभयो ।